RapLeaf Inowana Sei Dhata? Vashambadzi Vanogona Sei Kuishandisa?
Wednesday, May 30, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
"Ziva mutengi wako" inguva-inoremekedzwa pfungwa yekubudirira munyika yekutengesa. Ruzhinji rwevatengesi vanounganidza maemail kero, asi vanoshaya iyo yekuwedzera data iyo inogona kukubatsira iwe zviri nani kutaurirana nevaya vanonyorera. Rapleaf inobatsira iwe kudzidza zvakawanda nezve vatengi vako. Ivo vanopa huwandu hwevanhu uye mararamiro ehupenyu (zera, murume kana murume, chinzvimbo chemuchato, mari, nezvimwewo, tinya pano kuti uone zvese) kuUS vatengi email kero.
Zvakakosha here kubhadhara uye kushanda nesimba? Mhinduro pfupi ndeyekuti hongu. Mune yemazuva ese madhiri kesi yekudzidza, chikamu uye maitiro zvakaguma mune zvinotevera mhedzisiro:
30% kuwedzera mune ese akavhurika uye tinya-kuburikidza nemitengo uchishandisa yakanangwa misoro yenyaya uye zvemukati.
14% kuwedzera kwemihoro pamushandisi mutsva pamusoro pemazuva makumi matatu.
63% inoderera mumutengo pakutendeuka pamusoro peboka rinodzora.
Chetatu chetatu nguva kusvika kune inofungidzirwa kudzoka mukudyara uchishandisa kunongedza kwevakadzi.
Kushandisa Rapleaf kuri nyore. Isa rondedzero yeemail seyinyorwa faira kana pepa rekushambadzira, kuti uwane zera, murume kana murume, chinzvimbo chemuchato, mari yemhuri, basa, dzidzo uye rumwe ruzivo rwakadzika. Iyo kambani inoti ine ruzivo pane makumi manomwe kubva muzana emasevhisi eemail anoshanda muUS. Ivo vanovimbisa mechi yemitengo yakakura kudarika 70% uye vanotengesa marekodhi pahafu yedhenari rekodhi.
Zviri pamutemo here? Hongu. Rapleaf vanobatana nemakambani makuru (uye madiki) emadhizaini kuti aunganidze data uye arisunge kumaemail kero. Ivo tsvaga iyo kubva kune chete zviri pamutemo data bureaus vanoomerera kune ese mutengi zvakavanzika mirau - masosi anopa vatengi ziviso yakakodzera uye sarudzo nezve kugovana ruzivo rwavo. Ona yavo FAQ nokuti mamwe mashoko.
Kuwana ruzivo rwakadai sewemunhu munguva chaiyo nharaunda kunotendera mushambadzi kuti ape chaizvo zvinodiwa nemutengi, kana kutumira maemail anehunhu uye akakodzera pane kuita spam zvisingaite. Ruzivo rwakadai runovhenekera maficha evatengi vavo vakavimbika, zvichivabvumidza kuongorora mushandirapamwe wekushambadzira pamhepo.
Tags: tenga email dataechikero chetsamba yemumhepoemail dataemail kukurudzirarapleaf
Yemagariro Yemunharaunda Mafambiro